ဓာတ်ပုံသတင်း Archives - Page4of4- BuzzFeed Myanmar
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူအဖြစ် သင့်တော်သူများကို ၂၀၁၈ တွင် ရွေးချယ်ပေးအပ်မည်ဟုဆို
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ချီးကျိူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ၂၀၁၈ တွင် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ကြောင်း အတိုင်ပင်ခံရုံး ပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဇော်ဌေးကပြောသည်။
ညဘက် တရုတ်တန်းလမ်းဘေးဆိုင်တွင် ဒုတ်ထိုးစားနေသော သံဃာတော်ဗီဒီယိုပျံ့နှံ့
ရန်ကုန်မြို့ရှိ (၁၇)လမ်း တရုပ်တန်းတွင် ညဘက်အချိန်ခါတွင် လမ်းဘေး၌ ဝက်သားဒုတ်ထိုး ထိုင်စားနေသော သံဃာတော်တစ်ပါးအား မေးမြန်းရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိပြီး ဝေဖန်မှုများ မြင့်တက်လျှက်ရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာ(၂၂)ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့ လွိုင်မွေဖက်သွားသည့်လမ်းဘေးတစ်နေရာ နမ့်လပ်ရေအားလျှပ်စစ်အကျော်နားတွင် အမည်မသိ အမျိုးသမီးအလောင်း(မီးရှို့)ခံထားရသည့် အနေအထားမြင်ကွင်း ပါ။
ပလပ်ကျွတ် သွားတဲ့ ည တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပုံစံများ
သင် ..အသောက်အစားရှိလား ?? ဘယ်အတိုင်းအတာလောက်အထိ မူးခဲ့ဖူးလဲ…? ? Limit ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အထိ ပလပ်ကျွတ်ခဲ့ ဖူးပါသလား ? ? ? ဒီအောက်မှာတော့ အမူးလွန်ကာ ပလပ်ကျွတ် တဲ့ အနေအထားရောက်ရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ပုံစံတွေကို ဖေ်ာပြပေးထားပါတယ် ။